प्रकाशित मिति: October 13,2020
ई-खबरपत्रीका सम्बाददाता /काठमाडौ
बिश्व कोरोना कहर सङ्गै जुधिरहेको जो कोहिलाई अबगतै छ । यस्तो माहामारिको बिकराल अबस्थामा पनि नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन । यस्तो बिस्रम परिस्थितिमा पनि सिर्जनशिल हात र मनमस्तिस्क अघि बढ्छ भन्ने कुरा कार्टुनिस्ट राजेश मानन्धरले आज प्रमाणित गरेका छन । मानन्धरले आफ्नो सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा केहि कार्टुन कलेक्शन हुँदा आम नेपाली माझ जनचेतना र आत्मबल बढ्ने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशन गरेको ई-खबरपत्रीका लाई बताए । सो कार्टुन सङ्ग्रह बैशाख बाट सुरुवात सङ्गै करिब ४ महिना पछी काठमाडौं महानगरपालिका -७ द्वारा प्रकाशन गरिएको हो ।
आयोजित कार्यक्रममा का.म.न. पा.-७ का वडा अध्यक्ष शुद्धकुमार डङगोलले सङ्ग्रहको लोकार्पण गर्दै मानन्धरका कार्टुनको उच्च कदर गरेका थिए । कार्टुन सङग्रह प्रकाशन गर्दा माहानगरपालिकाको कुनै कोषबाट नभई विभिन्न बिज्ञापन र सहयोगीबाट सङ्ग्रह प्रकाशन भएको बताए । अध्यक्षले कार्टुनिष्ट मानन्धरलाई शुभकामना दिदै फेरि पनि यस्तै सामाजिक कार्यप्रति अझै निरन्तर सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिए ।
सामुदायिक बिधालयका प्र अ चन्द्रकान्त पण्डितले एउटा कार्टुनले हजार शब्द बोलेको हुन्छ एउटा शब्दले बोल्न नसकेको कुरा कार्टुन मार्फत बोल्दछ । यसकारण कार्टुनले समाजिक सुधार गर्न मद्दत गरि समाजलाई कोरोनाको त्रासबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश संग्रहमा उल्लेख भएको बताए । साथै कोरोना भाईरसलाई हामी जो कोहिले सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ कार्टुनमा देखाएको जान्कारी दिए । नेपाल जेसिसका उपाध्यक्ष शोभा खरेलले बिगत ६ महिना देखि हामी पेन्डामिक भैरहेकोबेला कार्टुनबाट जनचेतना जगाउने धेरै प्रभाबकारी हुने बताए ।
यस माहामारीको अबस्थामा कार्टुन मार्फत आफू , समाज र देश सचेत रहने खरेलले बताउदै कार्टुनिष्ट मानन्धरलाई बधाई दिए। साहित्यकार /समाजसेवी सर्दुर भट्टराईले मानन्धर लाई शुभकामना दिदै सुरुवात देखिनै मानन्धरको कार्टुन समसामयिक र सान्दर्भिक भएको बताए। मानन्धरले बनएका कार्टुन सामाजिक तथा राजनैतिक दुबैमा दख्खल भए सङ्गै उहाको कार्टुन बिशिस्ट र प्रतिभावान अब्बल कलाकारको रुपमा तुलना गरे । गहिरो अधयन बिना कुनै कार्टुनको परिकल्पना हुन सक्दैन यो सङ्ग्रह हासी, ठट्टा ,ब्याङ्ग्यात्मक वा घोचपेच भन्दा सामाजिक विषयलाई सचेत बनाउने शिक्षात्मक कार्टुन बनेको साथै बालबालिका लाई केही रोमाञ्चक कार्टुन पनि कोरेको बताए ।
बुढानिलकण्ठ स्कुलका प्र.अ. होमनाथ आचार्य लगभग ६ महिना अघि कोरोनाको कारण बिद्यार्थी वा कोहि सङ्ग भेट नभएको बेला आज यस कार्टुन सङ्ग्रहको लोकार्पण हुँदा कोरोना केही रुपमा जितेको अनुभुती गर्नु भयो । कुनै पनि बालबालिका, ब्यक्ती वा समाजलाई उहाँको कार्टुन बाट उर्जा,उत्साह थपिने भएकोले मानन्धरलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोना कहर बाट विवहाल भएको नेपाली प्रति कार्टुन मार्फत थप हौसला मिल्ने महसुस गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित पुस्तकका सल्लाहकार डा.भानुभक्त थपलिया , डा. गणेशराज अधिकारी , समाजसेवी तिमिला शाक्य अधिकारी सहितका सबैलाई सामाजिक दुरि कायम गर्दै हरिशरण ढुङ्गानाले उदघोष गरेका थिए । मानन्धरको कार्टुनमा शब्द लेखन सहकर्मी हरिशरण ढुङ्गाना सहित सम्पुर्ण सहयोगिमा हार्दिक धन्यवाद दिदै केही सुझाब सल्लाहको अपेक्षा गर्नुभयो ।